Boorsooyinka Shiinaha ee loogu talagalay Haweenka Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Hoyga > Bac qadada Bac qadada > Bacaha qadada ee haweenka
(1) Waxay ku hayn doontaa qadadaada heerkulka saxda ah illaa afar saacadood. Waxay leedahay 5 qaab oo qurux badan, mid walboo u eg shandad gacanta, oo wuxuu ku leeyahay jeeb dheeri ah xagga hore, kaasoo ku habboon kaydinta maacuunta ama gogosha. (3) Iyo boorsada ugu qadada adduunka, bacda qadada moodada ah. Waxaa jira gacan qabasho habboon, iyo tirtirka gudaha waa fududahay in la nadiifiyo.
(7) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadayn doonaa baakadka boorsadaan baseball-ka ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga
500-10000 wareegga wax soo saarka wareegga 45-50 maalmood
Calaamadaha kulul: Bacaha qadada ee haweenka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka